तपाईको फेसबुक गोपनीयता सेटिंग्स प्रबन्ध गर्नका लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन - नरम
तपाईको फेसबुक गोपनीयता सेटिंग्स प्रबन्ध गर्नका लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
कसरी तपाइँको फेसबुक गोपनीयता सेटिंग्स को प्रबंधन करने को लागी: फेसबुक साथीहरू र सहकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहन र तपाईंको खुशी जीवनको क्षणहरू उनीहरूसँग तस्वीर र भिडियोको रूपमा साझा गर्नको लागि एक उत्तम प्लेटफर्म हो। तपाईं विभिन्न व्यक्तिसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना विचारहरू साझेदारी गर्न र आफुलाई तपाईंको वरिपरि भइरहेको चीजहरूको साथ अपडेट राख्नुहोस्। फेसबुकलाई के गर्न मनपर्दछ तर यसमा यो सबै डाटाको साथ यसले गोपनीयता सरोकारहरूको एक धेरै धेरै खडा गर्छ। तपाईको व्यक्तिगत डेटाको साथ तपाई कसैलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, के तपाई सक्नुहुन्छ? त्यो पनि, बढ्दो साइबर अपराध मामिलाहरूमा! निस्सन्देह, तपाईले फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको सबै चीजहरू के हुन्छ त्यसमा ध्यान दिन वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, उदाहरणका लागि, कसले यो हेर्न सक्दछ वा को मनपर्दछ र तपाईंको प्रोफाइलमा सबै विवरणहरू व्यक्तिले देख्न सक्ने छन्। भाग्यवस, फेसबुकले धेरै गोपनीयता सेटि settingsहरू प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो डाटाको आवश्यकता अनुसार सुरक्षित गर्नुभयो। यी गोपनीयता सेटिंग्स ह्यान्डलिंग भ्रमित हुन सक्छ तर यो सम्भव छ। यहाँ कसरी तपाइँ तपाइँको फेसबुक गोपनीयता सेटिंग्स को प्रबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको डेटा संग के हुन्छ नियन्त्रण गर्न को लागी एक गाईड छ।
अब गोपनीयता सेटिंग्स ह्यान्डल गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं फेसबुकको धेरै सजिलो मार्फत सक्नुहुन्छ। गोपनीयता जाँच ’। यस चेक-अप को माध्यमबाट जाँदा तपाईंलाई समीक्षा गर्न अनुमति दिनेछ कि तपाईंको साझा जानकारी अहिले कसरी ह्यान्डल भइरहेको छ र तपाईं यहाँ सबै भन्दा आधारभूत गोपनीयता विकल्पहरू सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
चेतावनी: यो समय हो तपाईंको फेसबुक प्राइभेसी सेटिंग्स प्रबन्ध गर्न (२०१))
App.अप्स र वेबसाइटहरू
२.टाइमलाइन र ट्यागि।
P. सार्वजनिक पोष्ट
तपाईंको हालको गोपनीयता सेटिंग्स जाँच गर्नका लागि,
१ तपाईंको फेसबुकमा लगईन गर्नुहोस् डेस्कटपमा खाता।
२ क्लिक गर्नुहोस् प्रश्न चिन्ह विन्डोको माथि दायाँ कुनामा आईकन।
S.सलेक्ट ' गोपनीयता जाँच '।
गोपनीयता जाँचमा तीन प्रमुख सेटिंग्स छन्: पोष्टहरू, प्रोफाइल र अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू । हामी प्रत्येक एक एक गरी समीक्षा गरौं।
यो सेटि Withको साथ, तपाईं फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको कुनै पनि चीजको लागि दर्शकहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका पोष्टहरू तपाईको प्रोफाइल टाइमलाइन र अन्य व्यक्ति (मित्र) न्यूज फिडमा देखा पर्दछन्, जसले गर्दा तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईका पोष्टहरू कसले हेर्न सक्छ।
मा क्लिक गर्नुहोस् ड्रप डाउन मेनु उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये एक छनौट गर्न को लागी सार्वजनिक, साथीहरू, मित्र बाहेक, विशिष्ट साथीहरू वा मलाई मात्र।
तपाईं मध्ये धेरै को लागी, 'सार्वजनिक' सेटिंग को सिफारिश गरीएको छैन किनकि तपाईं चाहानुहुन्छ कि कोहीले पनि तपाईंको व्यक्तिगत पोष्ट र फोटोहरूमा पुग्न सकेन। तपाईं, त्यसकारण, सेट गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ' साथीहरु ’तपाईंको दर्शकको रूपमा, त्यहाँ तपाईंको साथी सूचीमा व्यक्तिले मात्र तपाईंको पोष्टहरू देख्न सक्दछन्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ ' मित्रहरू बाहेक ’यदि तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग आफ्ना पोष्टहरू साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने केही छोड्दा वा तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ '। विशिष्ट साथीहरु ’यदि तपाईं आफ्ना मित्रहरूको सीमित संख्यामा तपाईंको पोष्टहरू साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने।
विन्डोज १० प्रिन्टर पहुँच अस्वीकृत
नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले एकपटक आफ्नो दर्शकहरू सेट गर्नुभयो, त्यो सेटिंग तपाईंको सबै भविष्य पोस्टहरूमा लागू हुनेछ जब सम्म तपाईं यसलाई फेरि परिवर्तन गर्नुहुन्न। साथै, तपाइँको प्रत्येक पोष्टको फरक दर्शक हुन सक्छ।
एकचोटि तपाईले पोष्टिंग सेटिंग्स गर्नुभयो भने, क्लिक गर्नुहोस् अर्को मा सार्न प्रोफाइल सेटिंग्स।
पोष्टहरू जस्तै, प्रोफाइल सेक्सनले तपाईंलाई कसले हेर्न सक्दछ भनेर निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ तपाईंको व्यक्तिगत वा प्रोफाइल विवरणहरू जस्तै तपाईंको फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना, जन्मदिन, गृहनगर, ठेगाना, काम, शिक्षा, आदि। तपाइँको फोन नम्बर र इ - मेल ठेगाना सेट गर्न सिफारिस गरिएको छ ' म मात्र ’किनकि तपाईं चाहानुहुन्न कुनै पनि अनियमित मानिसहरूले तपाईंको बारेमा त्यस्ता जानकारी जान्न चाहन्छन्।
ब्लुटुथ विन्डोज १० गयो
तपाईंको जन्मदिनको लागि, दिन र महिनाको लागि वर्ष भन्दा फरक सेटिंग हुन सक्छ। यो किनभने तपाइँको सहि जन्म मिति उजागर गर्दा गोपनीयता त्याग हुन सक्छ तर तपाइँ अझै तपाइँका साथीहरूलाई यो तपाइँको जन्मदिन हो जान्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं दिन र महिनालाई 'मित्रहरू' को रूपमा र वर्ष 'केवल मलाई' को रूपमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै अन्य विवरणहरूको लागि, तपाइँ कुन गोपनीयता स्तर चाहानुहुन्छ र तदनुसार सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अन्तिम सेक्सनले ह्यान्डल गर्दछ जुन अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरूले तपाईंको जानकारी र फेसबुकमा तिनीहरूको दृश्यता पहुँच गर्न सक्दछन्। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन् जुन तपाईंले आफ्नो फेसबुक खाता प्रयोग गरेर लग इन गर्नु भएको हुन सक्छ। अब यी अनुप्रयोगहरू निश्चित छन् अनुमति र तपाईंको केहि जानकारीको पहुँच।
अनुप्रयोगहरूको लागि जुन तपाईं अब उपरान्त प्रयोग गर्नुहुन्न, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। एउटा अनुप्रयोग हटाउनका लागि, चेकबक्स चयन गर्नुहोस् त्यो अनुप्रयोगको बिरूद्ध र क्लिक गर्नुहोस् ' हटाउनुहोस् तल वा एक वा धेरै चयनित अनुप्रयोगहरू हटाउन बटन।
'मा क्लिक गर्नुहोस् समाप्त ’बटन गोपनीयता जाँच अप पूरा गर्नुहोस्।
नोट गर्नुहोस् कि प्राइभेसी चेक-अप ले तपाईंलाई केवल आधारभूत गोपनीयता सेटिंग्स मार्फत लैजान्छ। त्यहाँ धेरै विस्तृत गोपनीयता विकल्पहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईं रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यी गोपनीयता सेटिंग्स मा उपलब्ध छन् र तल छलफल गरिएको छ।
को माध्यमबाट सेटिंग्स तपाईंको फेसबुक खाताको, तपाईं सबै विस्तृत र विशिष्ट गोपनीयता विकल्पहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। सेटिंग्स पहुँच गर्न,
१ तपाईंको फेसबुक खातामा लगईन गर्नुहोस् डेस्कटपमा।
२ मा क्लिक गर्नुहोस् तल देखाउने एर्रो पृष्ठको शीर्ष दायाँ कुनामा।
C.क्लिक गर्नुहोस् सेटिंग्स
बाँया फलकमा तपाईले बिभिन्न सेक्सनहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईलाई प्रत्येक सेक्सनका लागि व्यक्तिगत सेटिंग्स को तरह व्यक्तिगत रूपमा समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ गोपनीयता, समयरेखा, र ट्यागिंग, ब्लक गर्दै, आदि।
चयन गर्नुहोस् ' गोपनीयता बायाँ प्यानबाट पहुँच गर्नका लागि उन्नत गोपनीयता विकल्पहरू।
तपाईंको भावी पोष्टहरू कसले हेर्न सक्छ?
यो एक जस्तै हो गोपनीयता जाँच को पोस्ट को खण्ड । यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको भविष्यको पोष्टहरूको लागि दर्शकहरू सेट गर्नुहोस्।
विन्डोज १० डेस्कटप आइकनहरू पुनःस्टार्ट पछि सार्छन्
तपाईका सबै पोष्टहरू र चीजहरू समीक्षा गर्नुहोस् जुन तपाई ट्याग हुनुहुन्छ
यो खण्ड ले तपाईंलाई लिन्छ गतिविधि लग जहाँ तपाईं पोष्टहरू देख्नुहुनेछ (अरूको टाइमलाइनमा तपाईंको पोष्टहरू), तपाईं ट्याग गर्नुभएको पोष्टहरू, तपाईंको टाइमलाइनमा अन्य व्यक्तिको पोष्टहरू। यी बायाँ फलकमा उपलब्ध छन्। तपाई समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक पोष्ट र निर्णय गर्नुहोस् मेट्नुहोस् वा लुकाउनुहोस् उनीहरु।
नोट गर्नुहोस् कि तपाई सक्नुहुन्छ अरूको टाइमलाइनमा तपाईंको पोष्टहरू मेटाउनुहोस् मा क्लिक गरेर सम्पादन आइकन।
तपाईलाई ट्याग गर्नु भएका पोष्टहरूका लागि तपाई ट्याग हटाउन सक्नुहुन्छ वा पोष्टहरू तपाईंको टाइमलाइनबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आफ्नै टाइमलाइनमा अरूको पोष्टहरूका लागि, तपाईं तिनीहरूलाई मेट्न वा तपाईंको समयरेखाबाट लुकाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईंले मित्रहरू वा सार्वजनिक साथीहरू सँग साझेदारी गर्नुभएको पोष्टहरूको लागि दर्शकहरू सीमित गर्नुहोस्
यो विकल्पले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाइँको सबै पुरानो पोष्टहरूको लागि द्रुत रूपमा सीमित गर्नुहोस् 'मित्रहरू' लाई, चाहे उनीहरू 'साथीका साथीहरू' वा 'सार्वजनिक' थिए। जहाँसम्म, पोष्टमा ट्याग भएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूका साथीहरूले पोष्ट हेर्न सक्षम हुनेछन्।
कसरी मानिसहरू भेट्टाउन र तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
कसले तपाईंलाई मित्र अनुरोध पठाउन सक्दछ?
तपाईं सार्वजनिक र साथीहरूको साथी बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साथीहरूको सूचि कसले देख्न सक्छ?
तपाईं आफ्नो प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै सार्वजनिक, साथीहरू, केवल म र कस्टमको बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईले प्रदान गर्नुभएको इ-मेल ठेगाना को प्रयोग गरेर कसले हेर्न सक्छ? वा तपाईंले प्रदान गर्नुभएको फोन नम्बरको साथ तपाईं कसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ?
यी सेटि settingsहरूले तपाईंलाई प्रतिबन्धित गर्न अनुमति दिन्छ तपाईंको ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर प्रयोग गरेर तपाईंलाई कसले हेर्न सक्छ। तपाईं यी दुवै केसका लागि सबैजना, साथीहरू, वा साथीहरूको साथीहरू माझ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाइँ फेसबुक बाहिरका अन्य खोज इञ्जिनहरू तपाइँको टाइमलाइनमा लिंक गर्न चाहानुहुन्छ?
यदि तपाईं आफैंमा गुगल हुनुहुन्छ भने यो सम्भव छ कि तपाईंको फेसबुक प्रोफाइल शीर्ष खोजी परिणामहरूमा देखा पर्नेछ। त्यसोभए मूलत: यो सेटिंगलाई बन्द गर्दै तपाईंको खोजलाई अन्य खोज ईन्जिनहरूमा देखा पर्न रोक्नुहोस्।
जहाँसम्म, यो सेटिंग्स, जब सकृय बनाइएको हुन्छ, तपाईंलाई धेरै चिन्तित गर्न सक्दैन। यो किनभने फेसबुकमा नभएकाहरूको लागि, यदि तपाईंले यो सेटिंग खोल्नु भएको छ र तपाईंको प्रोफाइल केही अन्य खोज इञ्जिनमा खोजी परिणामको रूपमा देखा पर्दछ भने, तिनीहरू केवल ती खास जानकारीहरू हेर्न सक्षम हुनेछ जुन फेसबुकले सँधै सार्वजनिक राख्छ, तपाईंको नाम जस्ता। , प्रोफाइल तस्वीर, आदि।
फेसबुकमा कोही पनि र तिनीहरूको खातामा लग-इन भएको तपाईंको प्रोफाइल जानकारी पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले सेट गर्नुभयो सार्वजनिक केहि अन्य खोज इञ्जिनबाट र यो जानकारी जे भए पनि तिनीहरूको फेसबुक खोज मार्फत उपलब्ध छ।
यो खण्डले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको टाइमलाइनमा के देखिन्छ नियन्त्रण गर्नुहोस् , कसले देख्दछ र कसले तपाईंलाई पोष्टहरू आदि ट्याग गर्न सक्छ।
wmiprvse.exe उच्च cpu विन्डोज 7
तपाईंको टाइमलाइनमा कसले पोष्ट गर्न सक्दछ?
तपाईं मूल रूपमा यदि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले तपाईंको टाइमलाइनमा पनि पोष्ट गर्न सक्दछन् वा यदि तपाईं आफ्नो टाइमलाइनमा पोष्ट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने मात्र।
तपाईंको टाइमलाइनमा अरूले के पोस्ट गर्दछ भनेर कसले देख्न सक्छ?
तपाईं बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना, साथी साथीहरू, साथीहरू, केवल म वा दर्शकको रूपमा कस्टम तपाईंको टाइमलाइनमा अरूको पोष्टहरूका लागि।
अरूलाई तिनीहरूको पोष्टलाई उनीहरूको कथा साझा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ?
जब यो सक्षम हुन्छ, तपाईको सार्वजनिक पोष्टहरू कसैलाई पनि उनीहरूको कथामा साझेदारी गर्न सकिन्छ वा यदि तपाईंले कसैलाई ट्याग गर्नुभयो भने, उनीहरूले यो कथामा साझा गर्न सक्दछन्।
टाइमलाइनबाट केहि शब्दहरू राख्ने टिप्पणीहरू लुकाउनुहोस्
यो एक भर्खरको र धेरै उपयोगी सेटिंग हो यदि तपाईं चाहनुहुन्छ केही अपमानजनक वा अस्वीकार्य शब्दहरू भएको टिप्पणी लुकाउनुहोस् वा तपाइँको मनपर्ने वाक्यांशहरु। केवल शब्द टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईं देखिन चाहानु हुन्न र एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं चाहानुहुन्छ भने CSV फाईल पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यस सूचीमा इमोजिस थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ध्यान देने योग्य मात्र कुरा भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले यस्तो शब्दहरू र उनीहरूका साथीहरू भएको टिप्पणी पोष्ट गरेको हुन्छ र अझै पनि यसलाई हेर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईको टाइमलाइनमा ट्याग गरिएको पोष्टहरू कसले देख्न सक्छ?
फेरि, तपाईं सबै बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, साथीहरूको साथीहरू, साथीहरू, केवल म वा कस्टम तपाईंको दर्शकको रूपमा दर्शकहरूको रूपमा जुन तपाईं तपाईंको टाइमलाइनमा ट्याग हुनुहुन्छ।
जब तपाईं पोष्टमा ट्याग हुनुहुनेछ, कसले श्रोतालाई थप्न चाहानु हुन्छ यदि उनीहरू पहिले नै यसमा छैनन्?
जब कोहीले तपाईंलाई पोष्टमा ट्याग गर्दछ, त्यो पोष्ट दर्शकलाई त्यो पोस्टको लागि त्यो व्यक्ति द्वारा चयनित दर्शकहरूको लागि दृश्यात्मक हुनेछ। जे होस्, यदि तपाईं श्रोताको लागि केही वा तपाईंको सबै साथीहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाइँले यो सेट गर्नुभयो ' म मात्र ’र पोष्टको मूल दर्शकहरूलाई त्यसपछि 'मित्रहरू' को रूपमा सेट गरिएको छ तपाईका आपसी मित्रहरू स्पष्ट रूपमा दर्शकहरूमा छन् र हटाइने छैन।
यस सेक्सन अन्तर्गत, तपाईं सक्नुहुन्छ पोस्टहरू रोक्नुहोस् जुन तपाईं ट्याग हुनुहुन्छ वा के अरूले तपाईंको टाइमलाइनमा तपाईको समीक्षा गर्नु अघि तपाइँको टाइमलाइनमा देखा पर्न पोस्ट गर्दछ। तपाईं यस सेटि turnलाई चालु वा बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
मित्रहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईं पोष्टहरू हेर्न चाहनुहुन्न जसको लागि तपाईंले दर्शकहरूलाई मित्रको रूपमा सेट गर्नुभयो। तीनिहरु तथापि, तपाईको सार्वजनिक पोष्ट वा म्युचुअल मित्रको टाइमलाइनमा साझेदारी गर्नु भएको देख्न सक्षम हुनेछ। राम्रो अंश यो हो कि उनीहरूलाई सूचित गरिने छैन जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रतिबन्धित सूचीमा थप्नुहुन्छ।
अवरोध प्रयोग गर्नेहरू
यस सूचीले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ केही प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुहोस् तपाईंको टाइमलाइनमा पोष्टहरू देखाउँदा तपाईंलाई ट्याग गर्दै वा सन्देश पठाउँदै।
तपाईं चाहनुहुन्छ भने कसैलाई सन्देश पठाउनबाट रोक्नुहोस्, तपाईं यो सूचीमा तिनीहरूलाई थप्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले जे होस् तपाईंको टाइमलाइनमा पोष्टहरू हेर्न, ट्याग गर्न, आदिमा सक्षम हुनेछन्।
ब्लक अनुप्रयोग आमन्त्रित र ब्लक ईवेंट निमन्त्रणा
विन्डोज १० मा हाइबरनेट सक्षम गर्नुहोस्
निम्तोका साथ बगि on गर्न जारी राख्ने ती रिसाउने साथीहरूलाई रोक्न यी प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं अनुप्रयोगहरू र पृष्ठहरू ब्लक गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ब्लक एपीपीएस र ब्लक पृष्ठहरू।
जब तपाईं गोपनीयता चेक-अपमा फेसबुक प्रयोग गर्न लग-इन गर्नुभएको अनुप्रयोगहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईं हुनेछ अनुप्रयोग अनुमतिहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी फेला पार्नुहोस् र कुन जानकारी उनीहरूले तपाइँको प्रोफाइलबाट पहुँच गर्न सक्दछन्। कुनै पनि अनुप्रयोगमा क्लिक गर्नुहोस् वा हेर्नको लागि अनुप्रयोगले पहुँच गर्न सक्दछ र कसले देख्न सक्छ कि तपाईं यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
यहाँ तपाइँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ कसले तिमीलाई पछ्याउन सक्छ? तपाईं कि त चयन गर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक वा साथीहरू। तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कि कसले मनपर्दछ, टिप्पणी गर्न वा तपाईंको सार्वजनिक पोष्ट वा सार्वजनिक प्रोफाईल जानकारी, आदि साझा गर्न सक्दछ।
विज्ञापनदाताहरु तपाइँको प्रोफाइल डेटा संकलन गर्न तपाईं मा पुग्न । ' तपाईंको जानकारी 'सेक्शनले तपाईंलाई निश्चित क्षेत्रहरू थप्न वा हटाउनको लागि अनुमति दिन्छ जुन तपाइँले लक्षित विज्ञापनलाई प्रभाव पार्नुहुन्छ।
थप, विज्ञापन प्राथमिकता अन्तर्गत, तपाईं सक्नुहुन्छ अनुमति वा विज्ञापन आधारित अस्वीकृत पार्टनरहरूको डेटामा, फेसबुक कम्पनी उत्पादनहरूमा तपाईंको गतिविधिमा आधारित विज्ञापन जुन तपाईं कहिँ देख्नुहुन्छ, र विज्ञापनहरू जुन तपाईंको सामाजिक कार्य समावेश गर्दछ।
त्यसोभए यो सबै थियो फेसबुकको गोपनीयता सेटिंग्स । थप रूपमा, यी सेटि settingsहरूले तपाईंको डाटालाई अनावश्यक दर्शकहरूमा लीक हुनबाट बचाउँदछ तर तपाईंको खाता पासवर्डको सुरक्षा भने अझ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले जहिले पनि कडा र अप्रत्याशित पासवर्डहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ दुई-चरण प्रमाणिकरण उही लागि।
विन्डोज १० सुरु गर्न असफल भयो
विन्डोज १० स्टप कोड ड्राइभर इरकिएल कम वा बराबर छैन
विन्डोज १० टच स्क्रिनले काम गर्न छाड्यो
यूट्यूबमा एडब्लक किन काम गरिरहेको छैन